ရေးသားသူ may16 at Saturday, October 31, 2009
မောင်ကောင်း October 31, 2009 at 4:36 PM
တန်ဆောင်မုန်းလအကြောင်းလေး ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်..။ အသိတိုးစေမယ့် စာစုတွေ ဆက်လက်ရေးသားဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ..။ အများအတွက် မိမိအတွက် အကျိုးရှိမယ့်စာစုများ ဆက်လက်ရေးသားဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေအစ်မ.. ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ...။
ဒဏ္ဍာရီ October 31, 2009 at 7:05 PM
မမရေ တန်ဆောင်တိုင်ဆိုတာ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ပွဲဈေးတွေလျှောက်လည်ရင်း မုန့်တွေစားရလို့ ပျော်ခဲ့တာပါ။ သေချာကို နားမလည်ပဲ ကလေးအတွေးနဲ့ အပျော်သက်သက်ပဲ နေခဲ့မိတယ်။
အခုမမရေးတဲ့ ပိုစ့်လေးကို သေချာဖတ်ရင်း မှတ်သားသွားပါတယ်နော်။ အခုလို စာပေဗဟုသုတနဲ့ စာဖတ်သူအတွက် အကျိုးရှိမယ့် စာလေးတွေအတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မမရေ ကျွန်တော်တော့ ပြည်ပရောက်နေလို့ လွမ်းနေမိတယ်ဗျာ သူခိုးကြီးညကို . . . .
kokomaung.uk November 3, 2009 at 12:58 AM
တန်ဆောင်မုန်းလဖွဲ့လေးနှင့် ရာသီပွဲတော်လေးက ကြည်နူးစရာပါ။
ကြာသင်္ကန်းမှတ်သွားပါပြီ အရင်ကတော့ ကြာကြာရက်ရလို့များလားလို့... ဒီ
အဖွားသုတ်ကြွေးတဲ့ မယ်ဇလီဖူးသုတ်လေး လွမ်းလိုက်တာ
သြော် အဖွား ၂
မိုးမောင် November 3, 2009 at 12:53 PM
တန်ဆောင်တိုင်အလွမ်းပြေလေး ဖတ်လို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတွေကို လွမ်းသွားတယ်ဗျာ။ :D
flowerpoem August 12, 2011 at 11:36 AM
ကျွန်မက "မြတ်မင်းလှိုင်" ပြုစုပြီး "စိုးမြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ (၁၂)လရာသီပွဲတော် (Myanmar Traditional Festivals) "စာအုပ်က နေကူးတင်တာပါ.
ကဗျာကတော့ "မြန်မာ့ရာသီပွဲတော်များ (သာရဝေါ- စိုးကြည်)"စာအုပ်က
ကျွန်မတင်တဲ့ ပို့စ်တွေ အကုန်နီးပါးက စာအုပ်တွေက ကူးတာပါ. .
တစ်ချို့ဟာတွေ က စာရေးသူနာမည်တွေ ဖော်ပြဖို့ကျန်ခဲ့တာပါ တမင်မရေးတာမဟုတ်ပါဘူး
စာရေးသူတွေကို သိချင်တာလား ဒါမှ မဟုတ် မယမင်းဆီက ကူးတယ်လို့ထင်ထာလား
နောက် ဒီပို့စ်ကို တင်ထားတဲ့ ရက်စွဲကလည်း Saturday, October 31, 2009
ကျွန်မတို့ သူများ ဘလော့ဂ်ကစာများကို မကူးဘူးပါဘူး စာရေးစာရာများရဲ့ စာအုပ်ထဲက ကောင်းနိုးရာရာတွေကို ကူးပြီးပဲရေးလေ့ရှိပါတယ်. . . ကျွန်မတို့ဘလော့်က စာတွေကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါ
စာရေးစာရာ နာမည် ဖော်ပြဖို့မေ့သွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်..